Mpitsidika 2,177,309 XNUMX tapitrisa: Manosika ny fitomboan'ny fizahantany ny fahalianana be ao Honduras
Home » Toerana fitsangatsanganana » Mpitsidika 2,177,309 XNUMX tapitrisa: Manosika ny fitomboan'ny fizahantany ny fahalianana be ao Honduras
Jona 6, 2017
Rehefa nampiantrano ny fivorian'ny vaomieram-paritry ny fizahan-tany eran-tany ho an'ny tany amerikanina i Honduras tamin'ny herinandro lasa teo dia nisy vaovao be nitaterany: ny fitomboan'ny fahatongavan'ireo mpizahatany sy ny fandaniam-bolan'ny mpizahatany, ny fitomboan'ny isan'ny mpandeha fitsangantsanganana sy ny fiantsoana seranan-tsambo ary ny fanatsarana ny fifandraisan'ny rivotra eo amin'izy ireo.
Araka ny lazain'ny Ivon-toeram-pizahan-tany Honduran (IHT), dia mpandeha iraisam-pirenena 2,177,309 2016 tapitrisa no nitsidika an'i Honduras tamin'ny 2,092,700, raha 2015 685.6 675.6 tamin'ny taona 2015. Nahatratra XNUMX tapitrisa dolara amerikana ny fandaniana fizahan-tany iraisam-pirenena raha oharina amin'ny XNUMX tapitrisa dolara amerikana tamin'ny XNUMX.
Seranam-piaramanidina iraisampirenena toa ny Spirit Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Avianca Airlines ary United Airlines no anisan'ireo manompo an'i Honduras, manolotra sidina tsy miato avy any Fort Lauderdale (2 ora), Miami (2 ora), Houston (3 ora), Atlanta (ora 3.5) sy tanàna lehibe hafa. Tamin'ny faran'ny volana aprily, ny tanàna indostrialy any Honduran, San Pedro Sula dia nanomboka nahazo sidina Air Europa mivantana avy any Madrid, Espana, nanamarika dingana lehibe iray ho an'ny fifandraisan'ny firenena amerikana afovoany.
Ny seranam-piaramanidina San Pedro Sula, Tegucigalpa ary Roatán dia efa ela no nahazo sidina iraisam-pirenena. Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Palmerola, miorina akaikin'ny tanànan'ny fanjanahantany ao Comayagua, dia hisokatra amin'ireo mpizahatany iraisam-pirenena amin'ny faran'ny taona 2018.
Araka ny antontan'isa ofisialin'ny seranan-tsambo, mpandeha fitsangantsanganana 1,052,738 nidina an-tsambo Honduran tamin'ny sambo 341 izay niantso an'i Roatán sy seranan-tsambo fitsangantsanganana hafa Honduran tamin'ny 2016, fiakarana 14.7 isan-jato raha oharina amin'ny isan'ireo mpandeha tamin'ny taon-dasa. Maro ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo izay avy any Houston, Tampa, Fort Lauderdale, Miami ary New Orleans dia ahitana ny fijanonana ao Honduras ao anatin'ny làlan-diany.
Honduras koa dia reharehan'ny tenany ho iray amin'ireo firenena tokana manerantany manome fiantohana fitsangatsanganana ho an'ireo mpitsidika ho isan'ny vidin'ny tapakilan'ny fiaramanidina iraisampirenany. Io politika io dia ahafahan'ny mpitsidika mahazo fanampiana fanampiny raha sendra lozam-pifamoivoizana, aretina ary fikorontanana hafa amin'ny dia.
Ranomasina sy antsitrika
Miorina ao Karaiba ary manamorona ny faritra Mesoamerican Barrier Reef, rafitra haran-dranomasina faharoa lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ny Nosy Bay dia ao anatin'ny fisintahana manan-danja indrindra any Honduras. West Bay Beach ao Roatán dia nahazo ny mari-pankasitrahana ho an'ny mpitsangatsangana safidy 2017 ho an'ny morontsiraka tsara indrindra any Amerika Afovoany ary iray amin'ireo morontsiraka tsara indrindra 25 manerantany. Frommer's dia nanasongadina an'i Roatán ao amin'ny Nosy Karaiba tsy hita izay ao anatiny: Torolàlana ho an'ny olona; ny seho HGTV House Hunters International dia nanasongadina an'i Roatán tamin'ny fizarana maromaro, ary ny Magazine Magazine dia nitanisa an'i Roatán ho iray amin'ireo nosy tsara indrindra hisotro ronono. Utila, mandritra izany fotoana izany, dia manao ny lisitr'ireo tranonkala antsitrika ambony indrindra manerantany. Mirohotra mankao amin'ny Nosy Bay ireo mpitsidika mba snorkel, antsitrika ary milomano amin'ireo biby an-dranomasina hafahafa toy ny antsantsa trozona, manta, feso feso, sokatra an-dranomasina ary sekolin-trondro. Azon'izy ireo atao koa ny mankafy hetsika rano hafa toy ny kayak, ski an-dranomasina, sambo ary fanairana.
Natiora sy ny traikefa nahafinaritra
Ankoatry ny fanolorana ny sasany amin'ireo tora-pasika an-dranomasina an-tampon'izao tontolo izao sy fitsidihana antsitrika, i Honduras dia mitovy dika amin'ny natiora sy ny traikefa nahafinaritra, ary noho ny antony marim-pototra: ny faritra arovana sy ny valan-javaboary 91 an'ny firenena dia mitentina 27 isanjaton'ny faritry ny firenena.
Ao amin'ny Pico Bonito sy Celaque National Parks, ny mpitsidika dia afaka mahita ny sasany amin'ireo karazam-borona 750 mahery hita any Honduras.
Ity firenena ity koa dia misy ny Reserve Río Plátano Biosfir Reserve, nantsoina hoe UNESCO World Heritage Site tamin'ny 1982; Lancetilla Botanical Gardens, zaridaina botanika faharoa lehibe indrindra eto an-tany; ary ny velaran-ala midadasika indrindra any avaratry ny ekoatera.
Honduras koa dia tanjon'ny rafting sokajy manerantany, miaraka amin'ny Rio Cangrejal, iray amin'ireo renirano malaza indrindra any Amerika Afovoany, manolotra rapide Class II ka hatramin'ny IV amin'ny làlany 20-kilometatra avy amin'ny Pico Bonito National Park mankany Karaiba.
Honduras dia mitahiry fanomezana arkeolojika sy manan-tantara isan-karazany, manome ny mpitsidika fotoana hianarana momba ny vazimba teratany manankarena sy ny fanjanahantany taloha.
Ny toerana arkeolojika Maya an'ny Copán any andrefan'i Honduras, izay nantsoina hoe UNESCO World Heritage Site tamin'ny taona 1980, dia mandray mpizahatany 100,000 XNUMX isan-taona izay tonga hijery ny sisan'ity sivilizasiôna lehibe ity ary koa ireo toeram-pambolena kafe eo akaiky eo.
Ny tanànan'ny mpanjanatany Espaniôla ao Gracias sy Comayagua dia anisan'ny mahaliana indrindra any Amerika Latina, miaraka amina fiangonana voatahiry tsara sy tranobe manan-tantara hafa.
Ireo vondrom-piarahamonina Garifuna, taranaky ny andevo afrikanina, dia mitahiry am-pireharehana ny fomba amam-panao nentin-drazana ary hita eny amoron'ny morontsirak'i Honduras.
Ny indostrian'ny fizahantany isam-paritra dia handray ny lahasa afovoany amin'ny kaonferansa manerantany UNWTO any Montego Bay, Jamaika
Himalayan Travel Mart dia mifarana amin'ny naoty ambony